पशुपतिनाथ जलहरीमा किन जोडिए कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
पशुपतिनाथ जलहरीमा किन जोडिए कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ?
भगवान शिवको वरिपरि जुन स्वरूप छ, त्यसलाई पार्वतीको स्वरूप मानिन्छ । शिवलिङ्गको तलको स्वरूप भनेको योनीको स्वरूप हो, जसले सृष्टिको क्रमलाई बुझाउँछ । जलहरी शक्ति र शिवको एउटा स्वरूप हो । जब शिव र शक्तिको सन्तुलन हुन्छ, तब मात्र श्रृष्टि हुन्छ भनिन्छ । भगवान शिवलाई जल चढाउँदा जल हरण हुने जुन भाग छ, त्यसलाई नै जलहरी भनिन्छ ।
भगवान पशुपतिनाथमा विशेष ६ वटा मुखहरू छन् । दक्षिणको मुखलाई अघोर तथा पश्चिमलाई सद्योजात, उत्तरलाई वामदेव, पूर्वलाई तत्पुरुष भनिन्छ । त्यस्तै, माथिको भागलाई ईसानरुद्र र तलको भागलाई अघोर विजतकाला भनिन्छ ।
शिवलिङ्ग कति प्रकारका हुन्छन् ?
स्वर्ण शिवलिङ्ग, तामाको शिवलिङ्ग, पितलको शिवलिङ्ग, माटोको शिवलिङ्ग साथसाथै फल तथा रुद्राक्षको शिवलिङ्ग। संसारमा जति पनि सृष्टि छन्, ती सबै शिवको स्वरूप हुन् ।
के थियो जलहरीको विवाद ?
भगवान शिव साक्षात् मसानमा बस्नु हुन्छ, भाङ्ग धतुरो खानु हुन्छ, भष्म धारण गर्नुहुन्छ । शिवजी आफैँमा दिव्य स्वरूप हो । त्यसैले उहाँलाई सुन चाँदी चाहिँदैन भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । प्राचीन स्मारकलाई असर पुग्ने गरी तोडफोड गरियो भनेर पनि विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा जलहरी राख्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको हो ।
तन्त्रको बारेमा ज्ञान नभएकाहरूले मात्र त्यसको विरोध गरेका हुन् । यसको अध्यात्मिक पक्षको बारेमा नबुझ्नेले मात्र त्यस्तो भनेका हुन् । शिवलिङ्ग मात्र हैन, सुनको पूजा सामग्री बनाएर पूजा गर्दा समृद्धिको सूचक मानिन्छ । त्यसैले सुनको जलहरी लगाइनु शुभदायक मानिन्छ । पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिनु अत्यन्त शुभ र लाभदायक हो ।
राजनैतिक कि आध्यात्मिक ?
पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीको विषयमा अहिले विवाद चलिरहेको छ । सुनको जलहरी राख्नु एकदमै राम्रो हो । पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी हाल्दा त्यो झन दिव्य भएको छ । स्वर्णमय शिवलिङ्गको पूजा गर्दा सामार्थ्य प्राप्त हुन्छ, बल प्राप्त हुन्छ । जसले स्वर्णमय शिवलिङ्गको पूजा गर्छ, त्यो समृद्धशाली हुन्छ ।
धर्तीमा जति पनि मानिस छन्, ती सबै भगवान शिवको सृष्टि हुन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सृष्टिकै एउटा हिस्सा हुनुहुन्छ । उहाँको पिता स्वयम् एक पण्डित हुनुहुन्छ । उहाँले कम्युनिष्ट विचारलाई स्वीकार गर्नु भयो । कसैले कांग्रेस विचारलाई त कसैले माओवादी विचारलाई पछ्याउलान् । वहाँ आध्यत्मिक हो कि हैन, धर्म र दर्शनलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन ? पशुपतिको रहस्यलाई बुझ्नुभएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न चाँहि बढी महत्वपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्री एक साधक व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ धेरै कुराको विषयमा ज्ञान राख्नु भएको छ । विश्वको राजनीति, पूर्वीय दर्शन, वेदान्त र धर्मको विषयमा पनि उहाँलाई ज्ञान छ । ‘उहाँसँग घण्टौसम्म कुराकानी भएको छ मेरो ।’ यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्र उहाँले यो निर्णय गर्नु भएको हो । त्यसले जलहरी राख्ने विषयमा उहाँलाई मेरो साथ छ ।
जलहरीको प्रसंगमा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री जोडिनु आध्यात्मिक मानिन्छ । उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने विषयमा सोच विचार गरेर तथा पशुपतिनाथको पुरानो स्वरूपलाई आँच नपुग्ने गरी सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
(डा.वासुदेव कृष्ण शास्त्रीसँगको कुराकानीमा सुमित्रा लुईटेलले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट)